Ukwenza umculo omtsha ngobukrelekrele bokwenziweyo, Isiphelo sendlela on 🥇
Ubukrelekrele bokwenziwa, okwangoku, buhamba buye ngaphaya kovavanyo kwaye buyabamba kwiiprojekthi ezininzi kunye nokusetyenziswa okusebenzayo. Phakathi kwezi, ezo zivelisa umculo ziyavela kakhulu, ukuze abo bangenalwazi ngezixhobo zomculo okanye amava ekuculeni basenokuzonwabisa kwaye bavule iingcinga zabo. Ubukrelekrele bokufakelwa busetyenzisiwe kumculo busebenza ngokusebenzisa ialgorithm ethi, ngokuvavanya inani elikhulu lokurekhodwa, likwazi ukuvelisa ngokuzenzekelayo ukwenziwa komculo okwahlukileyo. Ialgorithm idibanisa izaleko zezandi ezenziwe ngamanqatha, enemigca eyahlukeneyo yesixhobo ngasinye somculo.
Kukho ezininzi Usetyenziso lwewebhu onokuzama ngalo ukuveliswa komculo usebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela enokusetyenziselwa ukumamela okanye njengemvelaphi yevidiyo, umdlalo wevidiyo, okanye nayiphi na iprojekthi. Eminye imizekelo yezicelo zokuvelisa umculo omtsha nge-AI ziyafumaneka, simahla kwezi ndawo zilandelayo.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Iindawo zokudlala kwi-Intanethi kunye nokwenza umculo kunye nezinto ezixhasayo
1) Uhlobo lwefm Yiyo Umvelisi womculo ongasemva, inkulu ukuyisebenzisa xa uphumle kwaye ujonge, ihlala ngonaphakade. Umculo kule ndawo awuqanjwanga ngumntu, kodwa uveliswa ngokuzenzekelayo kwaye awupheli.
2) UMubert Yiprojekthi eguqukayo, onokuyivavanya kuhlobo lwedemo. Khetha ubude bexesha (ubuninzi bemizuzu engama-29) kunye nohlobo lomculo (Ambient, Hip-Hop, Elektroniki, iNdlu nabanye) okanye imo (ulusizi, wonwabile, uxolile, ukhululekile, njl. Isuka kumbhali. . UMubert unokuqamba umculo we-elektroniki ngexesha lokwenyani eliguqulela kwizinto ezithandwa ngumsebenzisi ngamnye, ukuze abantu ababini bangaze bamamele into enye.
3) Aiva.ai yindawo onokuyisebenzisa simahla yenza umculo omtsha. Xa usenza iakhawunti, unokuchaza ezinye iiparameter ezinje ngohlobo, ubude, izixhobo zomculo, ubude bexesha, nangaphezulu ukuvelisa ngokuzenzekelayo umculo omtsha onokumanyelwa kwi-Intanethi okanye ukhutshelwe. I-Aiva.ai yiprojekthi epheleleyo ekwi-Intanethi, kuya kufuneka uyizame. I-Aiva ikwanayo nesicwangcisi sebar yokulawula umculo, uyihlele ngokokuthanda kwakho, yongeza iziphumo kunye nemigca emitsha yezixhobo zomculo. Inqanaba lomhleli linokuba nzima ukuba awunamava.
4) Isandi yenye indawo yasimahla yokudala umculo omtsha usebenzisa ubukrelekrele bokufakelwa. Ngokwenza iakhawunti yasimahla, unokukhetha kwangoko uhlobo, imood, izixhobo, ixesha, ixesha, kwaye umamele iingoma ezenziweyo.
5) Ukunyuka yenye indawo yokuvelisa umculo onamandla ngokwenene, mhlawumbi lowo ukuvumela ukuba ube yimbumbulu xa kukhethwa iimpawu ekufanele ukuba zibunjwe ngazo. Apha unokufikelela kwisixhobo ngokwenza iakhawunti yasimahla. Xa usenza iprojekthi entsha yokuqamba, awunokwazi ukuchaza uhlobo, kodwa ubonise uhlobo lwesampulu phakathi kwezo zicetywayo kwaye ukhethe uhlobo lwentshukumo, izixhobo zomtya, njl. Ingoma entsha.
I-BONUS: Ukugqiba inqaku, kufanelekile ukwazisa malunga nendawo emnandi. Ibhlog kaGoogle Opera, eyenza amabala amane ahlukeneyo acule, nganye inelizwi le-Tatar opera, nganye inethoni eyahlukileyo (ibass, tenor, mezzo-soprano kunye nesoprano). Amazwi arekhodwa ziimvumi zobungcali kwaye zinokumodareyithwa ngokwahlukileyo ngokuhambisa amabala ahlukeneyo, ukubarhuqela phezulu nasezantsi ngasekhohlo nasekunene. Ixesha elingaphezulu unokwenza umculo wepati yeKrisimesi, uhlobo olucula ecaweni, ukuqala kwaye urekhode ukuze wabelane ngalo. Sebenzisa utshintsho lweKrisimesi unokumamela ezinye zeengoma zeKrisimesi ezidumileyo eziculwa ziibhloko. Imodeli yobukrelekrele bokusebenzisa isebenzisa amazwi afunyenwe ziimvumi ukwenza ii-blobs zibethe amanqaku afanelekileyo kwaye zenze izandi ezichanekileyo ukuvelisa ingoma eyonwabisayo kunye nefestile, ibenze bacule nabo.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Usetyenziso olungama-30 lokudlala nokwenza umculo kwi-Android, i-iPhone kunye ne-iPad
Bamba itheko elibonakalayo kunye nabahlobo okanye usapho kwiqela levidiyo